Chap vaneko me ho, Video chat mite get girlfriend teen
yo sex vanne kura ni kina esto pyaro huda raixa vanne balla tha hudai cha.
काठमाडौं, ३ असोज नेपाली सिनेमाकी चल्तीकी नायिका नम्रता श्रेष्ठ अश्लील भिडियोको विवादमा फसेकी छिन् । म्युजिक भिडियोकी महँगी र सिनेमाकी 'चुजी' नायिका नम्रताको 'मेरो एउटा साथी छ' काठमाडौंका हलहरूमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।नम्रता र किचयम चित्रकार(डिजेतान्त्रिक) ले सहवास गरेको लाइभ दृश्य भन्दै मोबाइल-मोबाइलमा भिडियो फरवार्ड भइरहेको छ । नम्रता र डिजे तान्त्रिक प्रेमी-प्रेमिका भएको र आफैले हेर्न मोबाइलबाट यस्तो दृश्य खिचेको चर्चा छ । भिडियो बजारमा आएपछि हंगामा भएको छ । ६ मिनेटको भिडियोमा देखिने युवतीले बाउलामा सेता धर्का भएको रातो ट्रयाक लगाएकी छिन्, तल केही पनि लगाएकी छैनन् । युवकले त तलमाथि केही पनि लगाएका छैनन् । युवा-युवती सहवासमा लिप्त छन्, वेला-वेला मोबाइलतर्फ पनि हेर्छन्, 'ब्याकग्राउन्ड'मा वेला-वेला संगीत पनि सुनिन्छ । संगीतसँगै दुवैजनाले पालै-पालो मुख-मैथुन गरेका छन् । क्यामेराले दुवैजनाको यौनांग जुम पनि गरेको छ । भिडियो हेर्दा सहवास मात्र होइन, 'सुटिङ' पनि सहमतिमा भएको स्पष्ट बुझिन्छ । उनीहरू दुवै मदिराले मातेकाजस्ता देखिन्छन् । स्रोतका अनुसार यो भिडियोले केही महिना पहिले नै बबण्डर मच्चाइसकेको थियो । डिजे तान्त्रिककी श्रीमतीले उजुरी गरेपछि माइती नेपालका अधिकारीहरूले नम्रता र तान्त्रिकलाई कार्यालयमै बोलाएर माफी माग्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । दुवैजनाले यस्तो क्रियाकलाप आइन्दा नगर्ने कसम खाएको चर्चासँगै पुरानो भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सो भिडियोमा देखिने युवाका रूपमा चर्चामा आएका डिजे तान्त्रिकसँग सम्पर्क हुन सकेन । नायिका नम्रताले भने सो भिडियो आफ्नो हो वा होइन भन्नेबारे केही बोलेकी छैनन् । विवादास्पद भिडियोबारे प्रस्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कुरा खोल्ने बताएकी छिन् । 'जे भन्नुछ म भोलि (आइतबार) भन्छु,' उनले नयाँ पत्रिकासित भनिन्, 'म पत्रकार सम्मेलन गर्छु, नभए प्रेस वक्तव्य जारी गर्छु ।' उनले भिडियो विवादबारे चासो राखेकोमा नयाँ पत्रिकालाई एसएमएसबाट समेत धन्यवाद दिइन्, तर भिडियोबारे चर्चा गर्न नै चाहिनन् । म्युजिक भिडियोमा भव्य सफलतापछि नम्रता चलचित्रमा छिरेकी हुन् । उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र 'सानो संसार' गत वर्ष हिट भएको थियो । उनको दोस्रो सिनेमा 'मेरो एउटा साथी छ' अहिले बजारमा छ । नम्रता नेपाली म्युजिक भिडियोकी सबैभन्दा महँगी मोडल हुन् । धेरै पुराना नेपाली नायिकाले एउटा चलचित्रबाट ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छन् भने नयाँ नायिका नम्रताले एउटै फिल्मबाट डेढ लाखसम्म लिने गरेकी छिन् । सहकर्मीहरू उनलाई महँगी भए पनि भलाद्मी कलाकार मान्छन् । सबै कुरा भोलि (आइतबार) बताउँछु: नम्रता शनिबार राति ९ :०० बजे नयाँ पत्रिका कार्यालयबाट नम्रताको मोबाइलमा डायल, फोन धेरै ढिलो उठ्छ । हेलो, नम्रताजी नमस्कार । को बोल्नुभएको ?
म नयाँ पत्रिकाबाट लक्ष्मण सुवेदी । ए, भन्नोस् न । बजारमा तपाईंको भन्दै एउटा अश्लील भिडियो आएको छ, त्यहीबारेमा तपाईंको प्रतिक्रिया लिऊँ भनेर । ए, मलाई पहिले तपाईंको मोबाइल नम्बर एसएमएस गरिदिनुस् न... फोन राखियो । राति ९ :१५ (एसएमएसमा नयाँ पत्रिका समाचारदाताको नम्बर गएको केहीबेरमा) नम्रताको मोबाइलबाट फोन आयो फोन- तत्कालै काटियो । राति ९ :१६ नयाँ पत्रिका कार्यालयको नम्बरबाट नम्रतालाई फोन । यसपटक पनि ढिलै उठ्यो फोन । नम्रता : हेलो को बोलेको ?
हैन, सबैको तिर्नुपर्दैन । भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माका अनुसार निजी गुन्टा झिटी भारीको सुविधा खारेज गरिएको छैन । त्यो भनेको के भनेर अचम्ममा पर्नु भो ?
एक सय ८० दिन विदेशमा बस्ने नेपालीले आफूले प्रयोग गरेको एकसरो सामान कर नतिरी ल्याउन पाउँछन् । के कस्ता सामान ल्याउन पाउने हुन् त ?
usko hath duitai mero hath le samatera lado vitra ghusaye………………hahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhvandai karaudai thi.
उसो भए बजारमा तपाईंले त्यो भिडियो 'फेक' हो, त्यो केटी म होइन भन्ने मुडमा हुनुहुन्छ ? यसबारेमा म अहिले केही भन्न सक्दिनँ । मलाई यसबारेमा फोन आएको आयै छ । म यो कुराले एकदमै डिस्टर्भ छु । मेरो सुटिङ भइरहेको छ । तनावले सुटिङमा पनि जान सकिनँ । कहिले बोल्नुहुन्छ त तपाईं ? मैले अब के गर्ने भन्ने डिसिजन लिन सकेकी छैन । भोलि नै मैले पत्रकार सम्मेलन गर्छु होला । नभए प्रेस रिलिज गर्छु । त्यसो पनि नभए पर्सनल्ली मिडियापर्सनलाई फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्छु । त्यसैले अघि तपाईंको मोबाइल नम्बर मागेकी । आज नै धेरै चर्चा भइसक्यो, केही त प्रतिक्रिया होला तपाईंको ?म अहिले केही पनि बताउन सक्दिनँ । भोलि नै भन्छु नि । तपाईं भोलि के भन्ने मुडमा हुनुहुन्छ ?विदेशबाट नेपाल फर्किनेहरुले पहिले टन्नै सामान घरायासी प्रयोगका लागि भन्दै ब्यागमा कोचेर लान पाउँथे । तर अब त्यसो गर्न नपाइने भएको छ । आइतबारदेखि भन्सार विभागले सबै स्थल नाकामा र हवाई नाकामा समेत सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउने सबैलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ । विदेशमा बसेर आउनेले सय रुपैयाँभन्दा माथिका कुनै न कुनै सामान ल्याइहाल्छन् भनेर एयरपोर्टमा नेपाल भित्रिने सबै यात्रुलाई संक्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भर्न अनिवार्य गरिएको छ । तपाईं सामान ल्याउनु्स् वा नल्याउनुस्, फाराम भर्नैपर्छ, भर्दिन भन्न पाइन्न । कस्तो हुन्छ त यो फाराम ?हेर्न भित्र आउनुस्- संक्षिप्त प्रज्ञापन पत्रको नमूना । ठूलो पारेर हेर्न फोटोमा क्लिक गरे हुन्छ, अनि त्यसो भए के सबै सामानको कर तिर्नुपर्छ त ?
Previous Post seving for indengirls
Next Post players on internet dating sites